China Iburu Angular Steel Grit ụlọ ọrụ na-emepụta | Feng Erda
Nlereanya / Nha:G12-G150 Φ0.1mm-2.8mm
Iburu Angular Steel Grit ka nke agbajikwa agba plate.The agba ígwè nwere MoR, Mo obere ọcha, o nwere ezi kwụsie ike n'ime Ọdịdị .Bkpị ihe anguler ígwè grit nwere elu anụ arụmọrụ, elu na-eyi ndị na-eguzogide, ya na-arụ ọrụ ndụ bụ 2.5 ugboro dị ka ogologo dị ka ogologo oge akwa-carbon nchara nchara na obere carbin nchara grit.
Okpukpe nwoke na nwanyi mebiri sorbite
Ewepụghị udi, ọtụtụ angular, nkọ angular
① Iburu angular ígwè grit bụ anụ na ihe onwunwe, magburu onwe ya na mejupụtara, na e dere obere mmewere Cr Mo, High ekweghị ekwe, karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na shipbuilding na pipeline na ndị ọzọ na nnukwu workpiece.
Iburu angular ígwè grit mmepụta usoro dị iche iche, mmepụta usoro adịghị agbanwe agbanwe mejupụtara nke akụrụngwa na àgwà.
③Ọ na-akpan iji bee konkiri na pụrụ inyere ndị ahịa nweta ngwa ngwa-ịcha arụmọrụ na smoother ọnwụ elu ekewet ya nkọ n'ọnụ ya, edo nha na ezi na-eyi ndị na-eguzogide.
Iburu angular ígwè grit adịghị mfe imebi, obere ájá, nwere ike n'ụzọ dị irè mma na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi nke ájá ọgbụgba ọkụ omumuihe, belata ibu na ájá mkpoko mkpoko gburugburu ebe obibi, na ahụ ike.
Anya igwe eji eme ohuru a ka emere site na igba ígwè nke gbachapụrụ agbagọ nke na-akwado Ggbaghara steeti, mana ọ bụghị steeti na-agbanye. Site n'usoro ọkachamara nke ịkụcha, ịpịpịa, sieving na ọgwụgwọ okpomọkụ pụrụ iche, nkụda mmụọ dị otú ahụ na-egosi ọdịdị angular na atụmatụ nke nkwụsị abrasive na ductility mmetụta. N'oge ojiji ahụ, egosiri na ọdịdị angular nke grit ga-eji nwayọ ghọọ arc, nke dabara adaba maka ikuku oxygenated, nhicha elu na ikpochasị elu, ka ọ wee nwee ike imeziwanye arụmọrụ na mkpuchi mkpuchi, na iji belata ume ike. nke agba, oriri abras na ihe ndị ọzọ, yana ịgbatị ndụ nke iyi akụkụ.
Osote: Aluminom gbaa / bee waya shot
Steel Grit ọgbụgba ọkụ
Steel Grit ọgbụgba ọkụ abrasive soplaya
Steel Grit ọgbụgba ọkụ Media